Ch 12 लूका – 2माछा
घर / बाइबल / लूका को सुसमाचार / Ch 12 लूका
12:1 त्यसपछि, रूपमा ठूलो भीड तिनीहरूले एकअर्कालाई मा stepping थिए भनेर नजिक उभिरहेका थिए, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्न थाले: "फरिसीहरूको को खमिर होसियार हुनुहोस्, जो कपट छ.
12:2 केही त्यहाँ ढाकिएको छ लागि, जो प्रकट हुनेछैन, न त केहि लुकेको, जो ज्ञात हुनेछैन.
12:3 तपाईं अन्धकारमा बोलेको छ कि कुराहरू ज्योति मा घोषणा गरिनेछ लागि. अनि के तपाईं बेडरूम मा कान मा भने गरेको housetops देखि घोषणा गरिनेछ.
12:4 त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्दछु, मेरो साथी: शरीर मार्न गर्नेहरूको डराएका हुन नगर्नुहोस्, र पछि तिनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुनै छ.
12:5 तर म तिमीलाई डर गर्नुपर्छ जसलाई तपाईं प्रकट हुनेछ. उहाँलाई डर जो, उहाँले हत्या हुनेछ पछि, नरक मा डाली शक्ति छ. त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्दछु: उहाँलाई डर.
12:6 छैन पाँच sparrows दुई साना सिक्का लागि बेचिन्छन्? र अझै यी मध्ये एक परमेश्वरको नजरमा बिर्सेका छ छैन.
12:7 तर पनि आफ्नो टाउको को धेरै hairs सबै संख्याको छन्. त्यसैले, नडराऊ. तपाईं धेरै sparrows भन्दा लायक अधिक हो.
12:8 तर म तिमीहरूलाई भन्दछु: मलाई स्वीकार गरेका हुनेछ मानिसहरूका सामु सबैलाई, मानिसको पुत्र पनि परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूलाई अघि उहाँलाई स्वीकार गर्नेछ.
12:9 तर सबैले मलाई मानिसहरूका सामु अस्वीकार गर्नेछ, उहाँले परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूलाई अघि अस्वीकार गरिनेछ.
12:10 र सबैलाई मानिसको पुत्र विरुद्ध शब्द बोल्छ गर्ने, यो उहाँको क्षमा गरिनेछ. उहाँलाई तर जो पवित्र आत्मा विरुद्ध blasphemed हुनेछ, यो क्षमा हुनेछ.
12:11 र तिनीहरूले सभाघरहरूमा तपाईं नेतृत्व गर्नेछन् जब, र म्याजिस्ट्रेटको र अधिकारीहरूले गर्न, तपाईं जवाफ कसरी वा कुन चिन्तित हुन चयन छैन, वा के तपाईं भन्न सक्छ.
12:12 लागि पवित्र आत्मा तपाईं सिकाउन हुनेछ, एउटै घण्टामा, तपाईं भन्न पर्छ के। "
12:13 अनि भीडले कसैलाई उहाँलाई भने, "शिक्षक, मलाई संग उत्तराधिकार साझेदारी गर्न मेरो भाइ बताउन। "
12:14 तर उहाँले उसलाई भन्नुभयो, "मानिस, तपाईं भन्दा न्यायाधीश वा निर्णायक रूपमा मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ जो?"
12:15 त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "होसियार र सबै avarice को wary हुनुहोस्. एक व्यक्तिको जीवनको लागि उहाँले possesses कि कुराको प्रशस्त मात्रामा पाइने छैन। "
12:16 त्यसपछि उहाँले एक तुलना प्रयोग तिनीहरूलाई बोल्नुभयो, यसो: "एक निश्चित धनी मानिसको उर्वरा भूमिको बाली उत्पादन.
12:17 अनि उहाँले आफूलाई भित्र लाग्यो, यसो: 'म के गर्नुपर्छ? म सँगै मेरो बाली भेला गर्न कतै छ। '
12:18 अनि उहाँले भन्नुभयो: 'यो म के गर्नेछ छ. म मेरो barns च्यात्नु र ठूलो व्यक्तिहरूलाई निर्माण हुनेछ. अनि यी मा, म मेरो लागि हुर्केका गरिएको छ कि सबै कुराहरू भेला हुनेछ, साथै मेरो माल रूपमा.
12:19 अनि म मेरो प्राण गर्न भन्नेछन्: प्राण, तपाईं धेरै सामान छ, धेरै वर्ष लागि भण्डारण. आराम, खान, पेय, र प्रसन्न हुन। '
12:20 तर परमेश्वरले उहाँलाई भने: 'मूर्ख एक, यो धेरै रात तिनीहरूले तपाईं आफ्नो प्राण आवश्यकता. कसलाई, त्यसपछि, ती कुराहरू हौं हुनेछ, जो तपाईं तयार छन्?'
12:21 त्यसैले यो आफूलाई लागि संगृहीत गर्ने उहाँसित छ, र परमेश्वरको संग धनी छैन। "
12:22 अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “And so I say to you: Do not choose to be anxious about your life, as to what you may eat, न त आफ्नो शरीर बारेमा, तपाईं लगाउने हुनेछ के गर्न रूपमा.
12:25 तर तपाईं को जो, सोच द्वारा, आफ्नो कद एक cubit थप गर्न सक्षम छ?
12:26 त्यसैले, if you are not capable, in what is so little, why be anxious about the rest?
12:27 Consider the lilies, कसरी बढ्न. They neither work nor weave. तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, not even Solomon, आफ्ना सबै महिमा मा, was clothed like one of these.
12:28 त्यसैले, if God so clothes the grass, which is in the field today and thrown into the furnace tomorrow, how much more you, विश्वासमा हे सानो?
12:29 अनि त, do not choose to inquire as to what you will eat, or what you will drink. And do not choose to be lifted up on high.
12:31 यद्यपि साँच्चै, seek first the kingdom of God, र उहाँको न्याय, and all these things shall be added to you.
12:54 अनि उहाँले पनि भीडलाई भन्नुभयो: तपाईं देख्दा "बादलले सूर्य को सेटिंग देखि बढ्दो, तुरुन्तै तपाईं भन्न, 'एक वर्षा बादल। आउँदै छ' अनि त यो गर्छ.
12:55 र दक्षिण हावा उड्ने बेला, तिमी भन, 'यो। तातो हुनेछ' अनि त यो छ.
12:56 तपाईं कपटीहरू! तपाईं स्वर्गको अनुहार बुझ्न, र पृथ्वीका, अझै यो छ तपाईं कसरी यो समय बुझ्न छैन भनेर?
12:57 अनि किन छैन, पनि आफैलाई बीचमा, बस के न्याय?
12:58 त्यसैले, तपाईं शासक आफ्नो शत्रु संग जाँदैछन् जब, तपाईं मार्गमा गर्दै, एक प्रयास उहाँलाई मुक्त गर्न, सायद lest उहाँले न्यायाधीश तपाईं सक्छ, र न्यायाधीश अधिकारी तपाईं प्रदान गर्न सक्छ, र अधिकारी झ्यालखानामा तपाईं डाली सक्छ.
12:59 म तपाईंलाई बताउन, तपाईं त्यहाँ देखि प्रस्थान छैन, तपाईं धेरै अन्तिम सिक्का भुक्तानी छन् सम्म। "